Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment यस्तो छ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता ! - Pnpkhabar.com
यस्तो छ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता !
काठमाडौं, ९ जेठ : भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म एकतर्फीरुपमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्र यसबारेमा नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि भने दशकौँदेखिको नेपाल-भारत सीमा विवाद् थप सतहमा आएको छ ।
गत बैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सेनाका उच्च अधिकारीसमेत राखेर नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो । भारतको उक्त कदम आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै सरकारले बैशाख २८ गते यहाँस्थित भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रामार्फत भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो । गत कात्तिकमा भारतले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिपछि आधिकारिक पत्रमा पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा ओगट्ने सम्पूर्ण भूभाग व्यास प्रगन्ना (हालको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने) क्षेत्र नेपालको भएकाले तिरो-तिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नु भनी इष्ट इन्डियाका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित उसका रेजिडेन्टलाई पत्र लेखेको उल्लेख छ ।
सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धका बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा सेना राखेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा १७ स्थानमा सेनाको चौकी राखिएको सीमाविद्को भनाइ छ । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १५ वटा चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्करको चौकी कालापानीमा गएर बसेको विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
त्यसपछि सरकारले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर सरकारले आफ्नो सिमानाको विषयमा गम्भीर कदम चाल्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको सीमाविद्को भनाइ छ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने विषयमा सन् १८१६ देखि १९९३ सम्मको नक्साले प्रष्ट पार्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उल्लेख गर्नुहुन्छ । सो क्षेत्रमा भारतले एसएसवीसहित इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गरी दैनिक हेलिकप्टर गस्ती गर्दा नेपालका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत नहुनु भने विडम्बना हो ।
दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा अहिले भारतको एसएसवी बल र इन्डो-तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ छ । सीमा क्षेत्रमा उनीहरुको चहलपहल बाक्लो छ । फोर्सका हेलिकप्टर दार्चुलाको सदरमुकाम आसपास भएर महाकाली नदी किनारैकिनार दैनिक ८/१० पटकभन्दा बढी ओहोरदोहोर गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीलाई जहाज र हेलिकप्टरले हवाई प्रदूषणसमेत गराउँदै आएको छ । उसले त्यहाँको सडक निर्माण सामग्रीसमेत हवाईमार्गबाटै लाने गरेको दार्चुलाका स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
भारतसँग जोडिएको सबैभन्दा लामो सीमा दूरी दार्चुला र झापाको १४६/१४६ किलोमिटर हो । कालापानीको उचाइ समुद्र सतहबाट तीन हजार ५०० मिटर र लिपुलेकको उचाइ पाँच हजार मिटर रहेको छ । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८८० किलोमिटर दूरीको छ । नेपाल र भारतबीचका सीमा नाका १५९ वटा छ । नेपाल र भारतको सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद नै छ ।